Syria: mbola any amponja ny mpanao gazety Maen Akel · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Febroary 2010 7:41 GMT
Maen Akel, mpanao gazety Syriana iray , voasambotra ny 11 Novambra 2009 ary ny sampam-pitsikilovana Syriana no nanao izany tany Damas. 48 ora latsaka taorian'ny fisamborana azy dia voaroaka tamin'ny asany tao amin'ny gazetim-panjakana iray, Al-Thawra ihany koa izy. Mbola tsy fantatra ny tena antony nisamborana azy.
Akel dia fantatra amin'ny fomba fanoratany somary mivantambantana, manesoeso sy mitsikera ny kolikoly ataon'ny Governemanta sy ny fahasarotan'ny fiainan'ny mponina Syriana andavanandro. Marihina fa efa gadra politika nandritry ny sivy taona izy noho ny maha mpikambana azy tao amin'ny [Communist Labor Bond].
Hatramin'iny nisamborana an'i Akel iny, dia namorona sy mitantana blaogy [ar] natokana ho azy ireo namany. Anatin'ny iray amin'ireo lahatsoratra, Ali Diob dia niteny [ar]:
Mihanjaka ny mpanao gazety, ohatran'ny olon-drehetra sy ny zava-drehetra any Syria, eo anatrehan'ny fahefana izay mitanjaka ihany koa manoloana ny tahotra. Tahotra izay hita taratra ao anatina hetaheta tsy mety mitony hanao vahoho amin'ny zavatra rehetra ary tsy iraharahana izay maty.
Ao amina lahatsoratra iray hafa, dia milaza ny heviny [ar] mikasika ny fahaizan'ireo Syriana mampandroso ny fanavaozana i Mazen Darwish :
Diso hevitra i Maen raha nieritreritra, tahaka ny eritreritry ny ankamaroantsika, mihevitra fa na dia eo aza ny fepetra noho ny hamehana dia mety hisy vokany tsara eo amin'ny fiainan'ireo Syriana rehefa mahakasika ny tombontsoam-pirenena izany.
Ny blaogy Syriana حركشات (Harkashat) dia namoaka lahatsoratra nosoratan'i Mazen Kom ElMaz izay nitenenany hoe:
Mbola miandry ny vesatra anenjehana an'i Maen izahay mba hahalalanay kokoa hoe aiza ho aiza izao ny toerany, manoloana ny zavatra noteneniny tamin'ireo gadrany, ary afaka, sa tsy afaka anoratra intsony izy amin'ny ho avy. Manoloana lehilahy iray isika, izay any am-ponja noho ny fandraisany ny tranon'ireo mahantra nanadanadana ny varavarany ho toy ny isam-pananany, ohatry ny tranony, satria tsy afaka manary azy ireo izy. Izany no mahatonga an'i Maen mendrika ny sento mafy avy aminay. Mendrika azy ny tahotra sy ny ahiahy manaraka ny fiandrasana namana lalaina.